Dowladda Soomaaliya ayaa kordhisay qeybinta deeqaha gargaar ee la siinayo dadka u baahan. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Dowladda Soomaaliya ayaa kordhisay qeybinta deeqaha gargaar ee la siinayo dadka u baahan.
By Liibaan Cabdi Caddow / June 2, 2020 June 2, 2020
Muqdisho:(SONNA)-War qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu yihiri Dowladda Soomaaliya waxa ay kordhisay qeybinta deeqaha gargaar ee la siinayo dadka u baahan.
Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya ayaa ka wadda goballada iyo degmooyinka dalka Gargaar la gaarsiinayo bulshooyinka u baahan.
Si loo yareeyo saameynta cunta yari ee ka dhalatay saf-marka COVID-19 ayey dowladda Soomaaliya deeq raashin ah waxa ay la gaartay dad kor u dhaafaya boqol kun oo qof.
Gobalka Banadir oo ah goobta uu saameynta ugu xooggan ku yeeshay xanuunka Coronvirus isla markaasna ay ku nool yihiin barkacayaasha ugu badan ayey Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka waxay deeq gaarsiisay dadka u baahan.
In kabadan 25,000 oo qoys ayaa la gaarsiiyay gargaar raashin ah iyadoo qoys kastana la siiyay cunto ka kooban 25kg oo kala bariis, bur iyo saliida cunta lagu karsado.
Sidoo kale dhammaan Goballada dalka ayaa Iyana laga qeybiyay raashinka iyadoo u jeedku ahaa sidii looga hortagi lahaa in xanuunka covid-19 uu sababo nafaqo darro baahsan oo ka dhalata meelaha ay ku nool yihiin dadka dan-yarta ah.
Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka DFS oo ka hadlay goob ka mid ah goobaha laga sameeyay raashin qeybinta, waxa uu sheegay in Dowladda Soomaaliya ay ka go’antahay in la yareeyo saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeelan karo bulshada guud ahaan iyo gaar ahaan qeybta nugul.